RW Rooble oo la saaray cadaadis ku aaddan kiiska Ikraan | KEYDMEDIA ONLINE
RW Rooble oo la saaray cadaadis ku aaddan kiiska Ikraan
Villa Somalia ayaa ka jira mashquul badan, iyadoo Fahad Yaasiin uu dalka ka cararay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa la kulmay cadaadiskii ugu xoogganaa tan iyo markii xilka loo magacaabey 2020 xili culeysyo badan kala kulmaya doorashadda.
Cadaadis ayaa lagu saarayaa Rooble inuu xilka ka qaado islamarkaana maxkamad soo taago Fahad Yaasiin, islamarkaana isaga iyo kuwii kale ee ku lugta lahaa dilka iyo afduubka Ikraan Tahliil.
Odayaasha dhaqanka, Xildhibaanada iyo Bulshadda Beesha Gaaljecel ee ka dhalatay Ikraan ayaa ka dalbaday Rooble in Gabadhooda ay Cadaalad hesho, oo la ciqaabo kuwii dilkeeda ka dambeeyay.
Sidoo kale, Musharixiinta Mucaaradka iyo aqoonyahanka ayaa baaq kaas lamid ah jeediyay, waxaana dhamaan dhinacyada kala duwan ay culeyska saareen Rooble, maadaama uu yahay ninka dalka xiligan ka mas'uulka ah.
"Taariikh baa is qoreysa Maanta, page-ka aad dooranaysid Cad iyo Mdow adigaa lagaa rabaa... waxaan kugula talin lahaa inaad midka cad dooratid...umada odhan adigey kusoo eegaysaa sidii aad Ikraan ugu caddaalad fali laheyd," ayuu yiri Prof. Xasan Sheekh Cali.
Ugaas Beesha Gaaljecel ayaa isna hadlay, wuxuuna sheegay inay aad uga xun yihiin warkii kaso baxay NISA Khamiistii ee sheegayay in Ikraan oo ka maqanayd qoyskeeda mudo ka badan labo bilood ay dishay Al-Shabaab.
Ugaas C/raxmaan Ugaas C/laahi: "Waxaan Aaminsannahay in gabadheenna ay haysato Nabad Sugidda, oo ay weli nooshahay, waxaana codsanaynaa in hadii dembi ay gashay lasoo taago cadaaladda, hadii kalena lasii daayo."
Ugaaska ayaa ku eedeeyay Farmaajo in uu qaabili waayay mar ay codsi u direen inay la kulmaan, taasoo uga wacan inuusan dooneynin Madaxweynaha mudo-xileedkiisu dhamaadey in kiiskan uu ka hadlo.
Kiiskan Ikraan ayaa ka billowday Fahad, isagana ayuu ku dhamaadey. Kahor inta aan warbaahinta Qaranka lagu shaacin geerida Ikraan Khamiistii, Fahad Yaasiin ayaa isaga cararay Magaaladda Muqdisho, isagoo ka baqaya in la xiro. [Halkan ka akhri warka].